Dare Rotangazve Kunzwa Nyaya yaVaRoy Bennett
Kukadzi 23, 2010
Mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vanoti VaBennett havasi kuzogadzwa semutevedzeri wegurukota rezvekurima kusvika nyaya yavari kupomwerwa yapera.
Kutongwa kwenyaya iri kupomerwa mubati wehomwe muMDC, VaRoy Bennett, kwakasimudzirwa neChipiri zvichitevera kumbomiswa kwaimbenge kwaitwa nyaya iyi mushre mekuramwa mabasa kuri kuitwa nevashandi vehurumende.
Mutongi wedare, VaChinembiri Bhunu, vapa mutongo wekuti zita regweta guru rehurumende, VaJohannes Tomana, harifanire kushandiswa negweta raVaBennett, Amai Mtetwa, mukuedza kuratidza kuti tsambambozha dzinonzi dzakanyoreranwa pakati paVaBennett naVaPeter Michael Hitshmann, dzaiva dzisiri dzechokwadi.
Pakapedezisira kunzwikwa nyaya iyi, Amai Mtetwa vakange vabuditsa tsambambozha dzisiri dzechokwadi dzaiva nezita raVaTomana vachida kuratidza dare semuenzaniso kuti chero ani zvake anogona kugadzira tsambambozha idzi.
Mushure memutongo uyu, Amai Precious Nyasha Matare, vanove mabharani musangano revasori uye vari mufakazi panyaya dziri kupomerwa VaBennett, vaburitsirwa imwe tsambambozha ine zita ravo yavasina kunyora negweta raVaBennett.
Imwe tsambambozha isiri yechokwadi yabuditsirwa Senior Assistant Commissioner Ronald Muderedzwa pavanga vachibvunzurudzwa naAmai Mtetwa pamusoro pehufakazi hwavapa mudare.
VaMuderedzwa vaudza dare kuti VaHitschmann ndivo vakazvipira kuvaudza nezvehurongwa hwavaiva naho naVaBennett hwekupidigura hurumende yaVaMugabe pavaiva muhofisi mavo.
VaMuderedzwa vati VaHitschmann vakavaudza kuti hurongwa uhu hwaiva mutsambambozha dzaiva mucomputer yavo.
VaMuderedzwa vati VaHitschmann havana kumbotaura nezvekutochwa kwavo pavaiva muhofisi yavo kwa Mutare kunyange hazvo VaHitschmann vakaudza dare kuti vakataura zvose zvavakataura vachiroverera VaBennett mushure mekunge vatochwa.
VaTomana vadaidza nyanzvi munyaya dzema comouter, VaPerekai Denchard Mutsetse, avo vanoshanda nekambani yeAfricomm kuti vape humbowo hwavo kudare.
VaMutsetse vaudza dare kuti munhu haakwanise kuverenga tsambambozha dzemumwe munhu kana asina password remunhu uyu.
Vachibvunzwa nemutongi wedare kuti vanyatsotsetsenura pamusoro petsambambozha dzaunzwa kudare naAmai Mtetwa, VaMutsetse vati imwe tsambambozha yaiva yechokwadi, asi imwe yacho yanga isiri yechokwadi, kunyange hazvo Amai Mtetwa vange vaudza dare kuti tsambambozha dzose dziri mbiri dzanga dzisiri dzechokwadi.
Nyaya iyi ichaendera mberi neChitatu apo Amai Mtetwa vakatarisirwa kubvunzurudza VaMutsetse.
VaBennett vari kupomerwa mhosva yokuronga zvokupidigura hurumende yaVaMugabe muna 2006 pamwe nekukurudzira zvohugandanga pasati
paumbwa hurumende yemubatanidzwa.
Asi VaBennett vari kuramba mhosva
dzavari kupomerwa vachiti zvine chokuita nezvematongerwo enyika.
VaMugabe vanoti havasi kuzogadza VaBennett semutevedzeri wegurukota rezvekurima kudzamara vachenurwa nematare pamhosva dzavari kupomerwa.